Saameynta duqeymaha Mareykanka ee Al Shabaab - BBC News Somali
Image caption Maraykanku wuxuu kordhiyey duqaymaha Al shabaab
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarrada xagga cirka ee ay ku bartilmaameedaadaan fariisimaha kooxda Al Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Dayaarado dagaal ayaa xalay mar kale duqeymo ku bartilmaameedsaday xeryo ay Al Shabaab ku leeyihiin deegaanno ka tirsan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay iney maqlayeen madaafiic dhowr ah oo lala dhacay meelo la rumeysan yahay iney ku suganyihiin Al Shabaab, iyadoo aan wali la xaqiijinin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan ugu dambeeyay.
Shalay ayey taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika sheegeen iney 37 xubnood oo ka tirsan Al Shabaab ku dileen duqeymo dorraad lala beegsaday isla fariisimahan xalay la weeraray.
US oo raadineysa hogaamiyaha Alshabaab
Image caption Duqaymaha waxaa badankood loo adeegsadaa dayaaradaha bilaa duuliyaha ah
Deegannada labada jeer ee isku dhow la duqeeyay ayaa ka tirsan Camaara iyo Caad.
Bishii Octoober ee la soo dhaafay ayey milatariga Mareykanka sheegeen in ciidankooda ka howl gala Soomaaliya ay duqeyn la qorsheeyay ku dileen ilaa 60 qof oo ahaa dhallinyaro ay Al Shabaab qoratay oo ku jiray xero tababar.
Sannadkan 2018-ka gudihiisa, 29 weerar oo xagga cirka ah ayey Mareykanka ka fuliyeen meelo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya, waxaana dhammaantood lagu bartilmaameedsanayay dhaqdhaqaaqyada Al Shabaab.
Sannadkii la soo dhaafay ee 2017-kii ayaa sidoo kale waxay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen 27 weerar oo noocaas ah.
Mareykanka guulo ma ka gaaray Duqeymaha ka dhanka ah Al Shabaab?
Bishii Maarso ee sannadkii 2017-kii, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump amar ku bixiyay in la xoojiyo weerarrada deg degga ah ee lala beegsado Al Shabaab, si gacan loo siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxdaas.
Iyadoo Mareykanka ay sare u qaadeen duqeymaha ka dhanka ah Al Shabaab ayaa su'aal la iska weydiinayaa sida ay weerarradaas u wiiqi karaan awoodda ay leedahay kooxda.
Lahaanshaha sawirka somalimemo
Image caption Al Shabaab waxay gacanta ku hayaan deegaanno ka tirsan koofurta Soomaaliya
Bayaan ay dhawaan soo saareen taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeymaha lala beegsado Al Shabaab ay yareeyaan dhaqdhaqaaqyada kooxdaas iyo weerarrada ay damacsan yihiin.
Sidoo kale mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa hadda ku doodaya in howlgalladoodu aysan waxyeello ka soo gaarin dad rayid ah.
Xuseen Maxamuud Maxamed (Xuseen Jaamici), oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha gobolka ayaa BBC-da u sheegay in duqeymaha Mareykanka ay saameyn leeyihiin, laakiin aysan gaarsiisneyn heer ay ku soo af jaraan kooxda Alshabaab, taasoo ah ujeeddada markii horeba loo billaabay.
"Uma muuqato iney natiijo buuxda keenayaan, sababtoo ah khasaaraha mararka qaar wuxuu saameyn ku yeeshaa dad rayid ah, duqeymahana wey soo socdeen ilaa sannadkii 2007-dii. Ilaa hadda ma jirto astaan muujineysa ama la is dhihi karo waxay duqeymahaas burburinayaan awoodda Al Shabaab".
Xuuseen ayaa intaas ku daray in duqeymaha ay leeyihiin ujeeddooyin iska cad oo la fahmi karo.
"Sida ay ila tahay ujeeddada laga leeyahay duqeynta Mareykanka ay la beegsadaan Shabaabka waa dhowr arrimood oo kala ah:
1-In ay kala dhantaasho xarakada oo aysan u suurtoobin iney si bareer ah isu aruursadaan, ciidamadoodana meel isugu geeyaan.
2-Iney hoos u dhigaan awoodda siyaasadeed iyo midda ciidan ee Alshabaab.
3-In lagu niyad jabiyo shakhsiyaadka hoggaanka u ah kooxda, dhaqdhaqaaqyadoodana lagu yareeyo.
4-In lagu gaarsiiyo khasaare naf iyo maalba leh.
5-In duqeymaha lagu caawiyo dowladda Soomaaliya" ayuu yiri.
Soomaaliya waxaa la qiyaasaa inay ku sugan yihiin ilaa 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, kuwaasoo u badan saraakiil ay howshooda tahay iney bixiyaan la talin.
Go'aan ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku shaacisay usbuucan in lagu dhimayo ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika iyo meelo kale ayaa si gaar ah loogu qeexay in aysan ka mid ahayn ciidanka ka howlgala Soomaaliya.